Testosterone Sustanon 250 powder ≥98% | AASraw Anabolics Steroids
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Testosterone Sustanon 250 powder
2.67 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 3 amanqaku umthengi
iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Testosterone Sustanon 250 powder, phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Testosterone Sustanon 250 abaphakeli be powder ngumxube we-testosterone (umxube) kwaye akukho mbuzo owaziwayo owaziwayo owaziwayo (3: 6: 6: 10).
I-Testosterone Sustanon i-250 yokusetyenziswa kwe powder kumjikelezo we-steroids
I-Testosterone I-Sustanon i-250 powder nayo ibizwa ngokuba yiSust, Testo Sust, uSust 250, Testo mix.
Testosterone Sustanon 250 powder Ukusetyenziswa
I-Sustanon dosing ngexesha lomjikelezo we-steroid kufuneka ngokubanzi lihlulwe libe yi-injection ezimbini ngeveki, kwaye ngaphezulu okungenani ezintathu.
(1) 250 mg ngeveki
Le yimizi ephantsi kakhulu kwaye isetyenziselwa ukunyanga abantu abaphantsi kobunzima be-testosterone. Kuba abaninzi abantu abanamazinga aqhelekileyo okanye aphezulu ase testosterone aziyi kuba neenguqu ezininzi ezibonakalayo. Ingxaki ngezinga lokulinganisa kukuba liya kuvalwa umveliso wezityalo ze-testosterone ngaphandle kokufumana izibonelelo eziqhelekileyo zemijikelezo ye-steroid evamile.
(2) 500 mg ngeveki
Ukuba ufuna ukubonela iziphumo ezilungileyo ke ke le nqanaba elincinci lomthamo. Le dosi ibangela iziphumo ezilungileyo zomjikelezo wokuqala kwaye ngokuqhelekileyo akukho mveliso eyongezelelweyo iyadingeka ukulawula amanqanaba e-estrogen. Nangona kunjalo, kucetyiswa ngamatyala amaninzi ukuba usebenzise izixhobo zokulawula i-estrogen.
(3) 750 mg ngeveki
Le nqanaba lemiphumo yesilinganiso kwiinguqu ezininzi ezibonakalayo ngenxa yezizathu ezicacileyo kodwa le dose idinga ukuba uthathe iimveliso ukulawula izinga le-estrogen. Ukuba amanqanaba e-estrogen alawulwa kwaye iziphumo zecala ziphantsi kakhulu.
(4) 1,000 mg ngeveki
Le nqanaba eliphezulu kakhulu kwaye linqweneleka kakhulu kubasebenzisi bezinga eliphezulu nabaphakathi. Abanye abasebenzisi bavame ukusebenzisa idosi ephakamileyo kakhulu kunoko, nangona kunjalo, akufuneki ngaphandle kokuba uvakalelwa kukuba iziphumo ziye zazinziwayo.
Isilumkiso kwi-Testosterone Sustanon 250 powder
I-Sustanon inefuthe lokunciphisa ixabiso elincinci ngenxa yoko i-sideto effectone iya kuguqulwa ibe yi-estrogen. Olu konyuka kumanqanaba e-estrogen luya kubangela iingxaki ezifana nokuphuhliswa kwebele phakathi kwamadoda kunye nokugcinwa kwamanzi okubanzi. Oku kungakhokelela ekubeni uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
I-Testosterone I-Sustanon i-250 powder iyinqobo ye-testosterone esebenza kwisiqhekeza esahlukileyo, ithandwa kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba. Yayisungulwe okokuqala kwi-HRT, apho ivumela ukuba ibe neyunithi enye ngenyanga. Nangona kunjalo, ngeemfuno eziphakamileyo ukuba ababubi bomzimba babe nezinga eliphakamileyo le-testosterone egazini, le nzuzo enkulu ayinakucatshangelwa kuba bafaka i-Testosterone Sustanon 250 powder kanye ngeveki.
Ekubeni i-testosterone esekelwe kwi-steroid, iziphumo zecala ye-estrogenic zingabonakala, kwaye ukugcinwa kwamanzi kungenzeka. Ngenxa yoko, isetyenziswa kakhulu njengenkathi ephumayo ngenxa yokuba iya kunika i-puffy mass.bulking AAS ngexesha
I-Testosterone i-Sustanon i-250 i-powder share share most benefits and effects of testosterone. Ngoko ke, ukuba umakhi womzimba unamava nge testosterone, i-Testosterone Sustanon 250 powder kufuneka ibe yinto yokusebenzisa i-steroid elula.
Testosterone Testosterone I-Sustanon 250 Iphophu ebomvu
I-Testosterone Sustanon 250 Iphini yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Testosterone Sustanon 250 powder evela kwi-AASraw